विश्वकै अ,चम्मको परम्परा, जहाँ पहिला यौ,नसम्पर्क गरेर मात्र विवाहका लागि केटी छानिन्छ । - Seto News
Homeरोचक जानकारीविश्वकै अ,चम्मको परम्परा, जहाँ पहिला यौ,नसम्पर्क गरेर मात्र विवाहका लागि केटी छानिन्छ...
विश्वकै अ,चम्मको परम्परा, जहाँ पहिला यौ,नसम्पर्क गरेर मात्र विवाहका लागि केटी छानिन्छ ।
एजेन्सी । कतिपय कुराहरू सुन्दै अनौठो लाग्छ । आ–आफ्नो ठाउको परम्परा अनुसार समाजको नियममा बाँ’धिनु पर्ने हन्छ । यस्तै छ कम्बोडियाको सुन्दा आ,श्चर्य लाग्ने खालको परम्परा जहाँ छोरीलाई आफ्नो जिवन साथी रोज्न एक भन्दा बढी पुरुषसंगका यौ’न सम्बन्ध राख्न अभिभावकले नै उक्साउँछन् ।
छोरीहरुको सजिलोका लागि बुवाआमाले नै घरभन्दा केही टाढा प्रेम झुपडी बनाइदिन्छन् । यसमध्येको एउटा परम्परा कम्बोडियामा छ, जहाँ युवतीहरुलाई धेरैजना पुरुषसँग यौ’न सम्बन्ध कायम गरी आफ्नो लागि उपयुक्त लोग्ने छान्ने स्वतन्त्रता छ ।कम्बोडियाको क्रिउन आदिवासीहरुमा विवाहको एउटा अ,नौठो परम्परा रहेको छ । आदिवासी समुदायका चेलीहरु विवाह पूर्वनै आफुले चाहेका एकभन्दा धेरै युवकहरुसँग यौ’न सम्पर्क गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् ।
उक्त लभ हट अर्थात् प्रेम झुपडीमा अविवाहित छोरीहरु आफूले चाहेको युवकसँग रात बिताउन तथा स,हवास गर्न समेत पाउँछन् । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।किशोरावस्थाबाटै छोरीहरुले त्यस्तो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दछन् र बाउले बनाइदिएको प्रेम झुपडीमा धेरै भन्दा धेरै युवकहरुसँग प्रेम तथा स,हवास गरी आफ्नो लागि उपयुक्त जिवनसाथी छनोट गर्दछन् ।
भनिन्छ श्रीमान र श्रीमती भनेको एक रथका दुइ पांग्रा हुन् । जी,वनमा यी दुईको वीचमा मेल हुनु एकदम आवश्यक हुन्छ । सुमधुर सम्बन्धले मात्र जीवन सहज हुने गर्दछ । श्रीमान-श्रीमती बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाई राख्न तपाई कहिल्यै पनि कुनै पनि हिसाबले आवेशमा आएर गलत ब्यवहार नगर्नुहोस् । भावनात्मक, मा,नसिक तथा शा,रीरिक कुनै पनि दृ,ष्टिकोणले आफुलाई सँधै शान्त राख्नुहोस् । एकजना प्रसिद्ध धार्मिक ब्यक्तिले भनेका छन् , मानिसहरु कसरी आफ्ना श्रीमतीलाई कु’ट’पि’ट गर्न सक्छन् र त्यही श्रीमतीसँग राती सु’त्न सक्छन् ?
जीवनभर एकअर्कालाई साथ दिने बा,चा कसम खाएर जोडिएको कतिपयको सम्बन्ध बिच बाटोमै आएर तो,डिन्छ । एउटै छानोमुनी बस्ने, एउटै ओछ्यानमा सुत्ने, एउटै थालमा खाने भा,वनात्मक सम्बन्ध जोडिएका जोडिहरु एकाएक किन टु,ट्छन् ? आत्मियताको साथ प्रगाढ बनेको सम्बन्धमा कटुता आउनु भ्रम र अविश्वास बढ्नु अन्ततः अलग विषय हुन् ।
तर सम्बन्धलाई पुनविराम दिने अवस्थामा पुग्न एउटै कारण हुँदैन् । यो बेला दुवैले आफुहरुको सम्बन्धमा केही न केही गल्ती गरेकै हुन्छन् । एक दाम्पत्य जोडी टु’ट्नु एक दु,खद कुरा कुरा हो । यसले श्रीमान श्रीमतीलाई मात्र हैन उनीको सन्तानलाई समेत नराम्रो असर पर्छ । उनीहरुका आफन्त , नातेदार इष्टमित्र छरछिमेकी यस्तो कुराबाट प्रभावित हुन्छन् ।
जब दम्पतिबिच फाटो आउँछ तब उनीहरु एउटै छानोमुनी बस्न सक्दैनन् र अलग हुन बा’ध्य हुन्छन् । पति पत्नीबिचको महत्वकांक्षा पनि कहिलेकाही दाम्पत्य सम्बन्धमा फाटो ल्याउने कारण बन्छ । एक विवाहित महिलाले घरको संघार नाघेर बाहिर आउनु बि,द्रोह गरे जतिकै हो ।कतिपय यस्तो परिवार हुन्छ जहाँ यस्तो अशोभनिय काम गर्नु र आफुलाई खुुम्चाएर राख्न सक्दैनन् । उनीहरुले आफ्नो इच्छा आंकाक्षालाई खुम्चाएर राख्न बा,ध्य हुन्छन् ।
घरको परिधिबाट बाहिर जान खोज्दा पति पत्नी बिचको स,म्बन्धमा मतभेद आउँछ । कारण स,म्बन्धले अर्कै मोड लिन्छ । कतिपय श्रीमती उच्च महत्वकांक्षा हुने हुँदा उनीहरु परिवारको परिधिबाट बाहिर आउन चाहन्छन् ।यस्तो अवस्थामा श्रीमान श्रीमतीको मतभेद मिल्दैन् । यस्तै कुरालाई नियाल्नै जाने हो भने के श्रीमती महत्वाकांक्षी हुनु स,मस्या हो त ? भन्ने ज,टिल प्रश्न आउन सक्छ । किनकी हाम्रो समाजमा एक विवाहित महिलालाई परिवार सम्हाल्ने दायित्व दिएको हुन्छ ।
तर त्यसलाई उचित तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु चाँही समस्या हो । अक्सर श्रीमतीको महत्वकांक्षा पुरा गर्ने बाटोमा श्रीमानले सहयोग गर्छन त भन्ने कुरामा नकारात्मक जवाफ आउन सक्छ । किनकी पुरुष आफै अभिमान हुन्छ । अक्सर धेरै श्रीमान चाहन्छन् की श्रीमती आफु भन्दा अगाडी नजाओस् । Onlinenews